Madaxweynaha Jsl Oo Baarlamaanka ka hor jeediyey Khudbad Sanadeedkii Dastuuriga ahayd | Radio Hormuud
Madaxweynaha Jsl Oo Baarlamaanka ka hor jeediyey Khudbad Sanadeedkii Dastuuriga ahayd
Hargeysa(RH):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta khudbadiisa sannadlaha ahayd ka hor jeediyay labada gole ee barlamanka ee guurtida iyo wakiilada Somaliland
Madaxweynaha ayaa khudbaddiisa uga hadlay arrimaha siyaaaadda dibedda, dhaqaalaha iyo arrimaha doorashooyinka,Amniga iyo arimo kale oo muhiim ah
Khudbad-Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa Nuxurkeedu u dhignaa sidan:-
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare,
Xubnaha Golaha Wasiirrada,
Taliyayaasha Ciidammada Qalabka-sida,
Shacabka JSL meel kasta oo ay joogaan,
Waxa Miisaaniyadda Qaranka sannadkii tagay laga maal-geliyey 98 Mashruuc. Mashaariicdaas oo ku kacay qiime lacageed oo gaadhaya 163.7 Bilyan oo SL.Shillin ah, una dhiganta 23.3 Milyan Doollar, waxaanay ka badan yihiin mashaariicdii sannadkii hore 3.11%, waxaana dhammaantood la mariyey Qandaraasyada Qaranka iyo Tartan daah-furan.
Waxa la oddorosayaa in Miisaaniyadda Sannadka 2022-ka laga maal-geliyo 122 mashruuc, oo qiimahoodu gaadhayo 293 Bilyan oo SL.Shillin ah, waxaanay lacag ahaan ka badan yihiin 79% mashaariicdii sannadkii hore.
Deeqaha Dibedda aynu ka helno waxa ay dalka ka fuliyeen sannadkii tagay mashaariic horumarineed oo qiimahoodu dhan yahay 164.6 Bilyan oo SL.Shillin ah, una dhiganta 23.5 Milyan doollar. Mahad-celin kadib, Bulshada Caalamka waxaanu u sheegaynaa in Bulshada Somaliland ay tabayso taageero ama deeq macno leh oo u qalma milgaha iyo gobonnimada Shacabka Somaliland.
Waxa lagu kordhiyey Shaqaalaha Dawladda 13% sannadkii tagay, taas oo ka dhigaysa in afartii sanno ee la soo dhaafay la kordhiyey tirada Shaqaalaha Dawladda 7,907 qof, una dhiganta in guud ahaan Shaqaalaha Dawladda la kordhiyey 39%, kuwaas oo badankoodu ku shaqo-galay Barnaamijka guulaystay ee Shaqo Qaran.
Qiimaha Shillinka Somaliland waxa lagu ilaaliyay 8,400 halkii Doollar ba, Sicir-bararkuna 3.5 % ayuu hoos ugu dhacay sannadkii tagay. Waana heerkii ugu hooseeyay ee muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan uu gaadho.
Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sidoo kale qaaday tallaabooyin taabanaya nolosha dadka, waxaanu sannadkii 2021-ka ku maal-geliyey lacag xaddigeedu ka badan yahay 13 Milyan oo doollar oo ah mashaariic u badan Kaabayaasha Dhaqaalaha oo ay wadaan qaar ka mid ah Hay’adaha Dawladda Dhexe iyo qaar ka mid ah Dawladaha Hoose ee dalka.
Dhismaha iyo casriyeynta Dekedda Berbera marka uu dhammaado, Dekedda Berbera waxa ay noqon doontaa mid ka mida dekedaha ugu dhererka badan Qaaradda Afrika, waxaanu dhererkeedu noqon doonaa 1,650 Mitir, gunta iyo Qotada Dekeddu waxa ay noqonaysaa 17 Mitir oo hoos ah, taas oo ka dhigaysa Dekedda labaad ee ugu gun-dheer Afrika, oo qaadi karta Maraakiibta ugu waaweyn adduunka, iyada oo rogi karta 2 Milyan oo Kontayner sannadkii, halka ay hadda ka rogi karto 500,000 Kontayner.
Waxa laga dhigay Madaarka Berbera, Madaar Caalami ah, oo u adeegi kara dhammaan badeecadaha iyo Shucuubta Dalalka aan Dekedaha lahayn ee Afrika, waxaanu ka mid yahay maanta goobaha adduunka loogu xiisaha badan yahay. Xukuumaddu waxay shacabka uga faa’iidaynaysaa goobta istraatejiga ah ee Eebbe innagu uumay, oo adduunka oo dhan xiisaynayo.
Waxa dhammaad ku dhaw Waddada Burco – Ceerigaabo, waxaana hadhsan 10 KM oo keliya. Waxa dhammaaday 262 KM oo innoogu kacay qiime lacageed oo gaadhaya 54,484,000 Doollar, dhammaan lacagtaana waxa laga bixiyey Miisaaniyadda Qaranka ee dalkeena.
Dhismaha Waddada Burco-Ceerigaabo waxay wax weyn ka beddelaysaa Dhaqan-dhaqaalaha (Socioeconomic aspect), isku socodka bulshada iyo ganacsiga ee dadkeena, tusaale ahaan: Magaaladda Burco ilaa Ceerigaabo waxa lagu gaadhi jiray 9 ilaa 10 Saacadood oo socod xidhiidh ah, haddase waxa lagu gaadhaa 5 saacadood. Noolka gaadiidku qofkiiba waxa uu ahaa ku dhawaad 60 – 80 Doollar, haddase waa 20 doollar oo keliya.
Waxa dhammaaday Dhismaha Wejiga Koowaad ee Waddada Berbera Corridor oo ah Hargeysa–Berbera, waxaana ku jira afar Biriish oo dadka iyo alaabooyinka iskaga goosha Berbera iyo dalka intiisa kale ay kala kulmi jireen dhibaatooyin waaweyn xilli-roobaadka.
Waxa dhawaan bilaabmay Dhismaha Aagga Ganacsi ee Cashuuraha ka-caagan (Free Zone), waxaana qorshaysan in la dhiso dhul gaadhaya 54 Hector, oo loo qaybin doono Laba Weji. Wejiga Koowaad waxa la dhisi doonaa dhul gaadhaya 34 Hector, oo isugu jira Waddada isku Xidha Aaga Ganacsi ee Cashuuraha ka-caagan iyo Dalka intiisa kale, Dhismaha Xafiisyada Maamulka, Dhismaha Hangarada waaweyn ee loo diyaariyey Shirkadaha iyo Marinka Baadhista Kontayneriska. Waxa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ahba, isla markaana uu shaqo u sameeyo in ka badan 1,000 qof.
Waxa la bilaabay oo socda dhismaha carro-kaawada Waddooyinka Oodweyne-Burco iyo Laascaanood-Kalabaydh, waxaanay ku dhammaan doonaan muddo kooban, Insha Alla.
Waxa hadda dhammaaday sahaminta (Feasibility Study) Waddada isku xidha Lawyacaddo – Boorama, Waddadaas oo uu innaga Caawiyey Baanka Horumarinta Africa, waxaana loo bilaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Dhinaca Waxbarashada, waxa sannadkii tagay la dhisay 57 Dugsi oo cusub, waxaana la dayac-tiray 24 dugsi oo hore.
Waxaanu waajib ka dhignay in 10% ardayda Jaamacadaha Dawladda iyo 12% ardayda Jaamacadaha gaarka loo leeyahay ay helaan Deeq Waxbarasho, si loo kordhiyo helitaanka tacliinta sare.
Waxa xarumaha Caafimaadka ee Dawladda adeegyo caafimaad loogu fidiyey 1,530,000 qof, oo ka badan sannadkii hore 2%.
Waxa la qaaday Toddoba Olole oo ah Wacyi-gelinta iyo tallaal bixinta Xanuunka Caabuqa COVID-19, waxaana la tallaalay 557,723 qof, una dhiganta 30% dadweynaha da’doodu ka weyn tahay 18 jir.
Waxa la daweeyey 3 Milyan oo Neef, waxa nafaqayn la siiyey 1.75 Milyan neef, waxa ka faa’iidaystay 75,000 xoolo dhaqato ah.
Waxa la dhisay Shaybaadhka Qaranka ee baadhista cuntada iyo dawooyinka oo ku kacay lacag gaadhaysa 13,440,000,000 SL.Sh.
Waxa la qoday 41 Ceel dhaadeer oo cusub iyo 6 Ceel oo gaagaaban oo cusub, waxaana la dayactiray 60 ceel oo dhaadheer.
Waxa la qoday 20 Ballay oo waaweyn oo ku kala yaal Gobollada dalka.
Waxa la qaybiyey 50,000 nuqul oo ah buugga Dastuurka JSL, si loo kor loogu qaado barashada sharciga ee muwaadiniinta.
Waxa horyaallada dalka ku tartamay 90 Kooxood, waxa ay ciyaareen 485 ciyaarood, waxa ciyaarahaasi saftay 3,043 Ciyaartoy, waxaana daawaday dad ka badan 1,800,000 qof.
Sidaas darteed, annaga oo ka duulayna mabaa’didaasi kor ku xusan iyo Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa aannu waajibinay in Mashaariicda laga fuliyo dhaqaalaha ama Miisaaniyadda Qaranka ee ka badan 42,000,000 SL.Sh la mariyo Nidaamka Qandaraasyada Qaranka oo daah-furan, Muwaadiniinta Somalilandna ay u helaan fursado siman oo ay si caddaalad ah ugu tartami karaan. Waxa aan halkan mar kale ka caddaynayaa in Hay’adda Dawladeed ee ku dhaqmi wayda go’aankaas laga qaadi doono tallaabo ku habboon.
Waxa raashin ay ku noolaan karaan muddo bil ah iyo taageero lacageed oo kooban loo fidiyey in ka badan 750,000 qoys oo kala jooga dhammaan Gobollada dalka.
Waxa sidoo kale 20,000 oo ah haween oo kala jooga 16 Magaalo oo ku kala yaala Gobollada dalka la gaadhsiiyey taageero dhaqaale oo gaadhaysa $640,000 Doollar.
Waxa dalkeena soo food-saartay abaar ba’an oo saamayn ku yeelatay in ku dhaw 1.5 Milyan qof oo Reer Somaliland ah. Saamaynta ugu daran ee abaartu waxa ay ahayd biyo yaraan. Sidaa darteed, Xukuumadda oo kaashanaysa ganacsatada waaweyn ee dalkeena ayaa 24,600 oo booyadood (Load) oo dhaansan gaadhsiiyey gobolladii ay ugu darnayd biyo yaraanta ay abaartu keentay. 72% booyadahaas waxa bixiyey Xukuumadda iyo Shacabka Somaliland oo iskaashanaya, halka Hay’addaha gar-gaarku ka bixiyeen 28%.
Waxa aannu magacawnay Guddi Heer Qaran ah oo hagta hoggaaminta dib-uga-soo-kabashada Khasaaraha Dabkii Waaheen. Guddidaasina waxa ay sii dhistay Guddi-hoosaadyo ka kala socda Suuqii Waaheen, Ganacsatada, Culimada iyo Qurbaha, ilaa haddana si wacan ayay hawshoodu u socotaa.
Waxa la diyaariyey Afar Suuq oo ku Meel-gaadh ah oo kala ah: Beerta Xoriyadda, Hadh-wanaag, Laynka Booliska iyo Injida. Waxa la gaadhsiin doonaa suuqyada ku-meel gaadhka ah ilaa Toddoba suuq.
Waxaan halka uga soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin ballaadhan dhammaan dadkii waxyeeladdu ka soo gaadhay dabkii Suuqa Waaheen, waxaanan uga mahad-celinayaa sida wanaagsan ee ay u samir-qaateen iyo iimaankooda adag iyo waliba sida xil-kasnimada leh ee ay ula shaqeeyeen Guddiyadii hawshaa loo xil-saaray.
Waxa aynu ka baranay in la xoojiyo, gacanna lagu siiyo shaqadooda Ciidanka Dab-demiska oo muujiyey karti iyo awood ay ku dheehan tahay waddaniyad.
In la diyaariyey, isla markaana la gudbiyey Mooshinka Xeerka Ishaashiga Somaliland iyo Maraykanka “Somaliland Partnership Act”, kaas oo ka dalbanaya in Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka oo kaashanaysa Wasaaradda Gaashaan-dhigga in ay soo dar-saan qaabka ugu habboon ee Somaliland iyo Maraykanku Iskaashi u yeelan karaan mustaqbalka.